1. Incazelo Yolwazi Lomuntu Siqu
Imininingwane eningiliziwe ngokuvakashela kwakho iwebhusayithi nezinsizakusebenza ofinyelele kuzo. Ikhukhi iqoqa uhla lwemininingwane, njengekheli le-IP, isistimu yokusebenza, nesiphequluli esisetshenzisiwe.
Ngokuya ngamakhasi ewebhu avakashelwe, amanye amakhasi angaba namafomu aqoqa imininingwane ngawe, njengegama lakho, inombolo yekhodi yeposi, ikheli le-imeyili, njll.
2. Inqubomgomo yethu Yekhukhi
Amakhukhi asetshenziselwa ukwandisa ulwazi lwakho lwewebhusayithi ngokususelwa ekusebenzisaneni kwakho kwangaphambilini nesayithi. Ikhukhi liyalandwa futhi ligcinwe yisiphequluli se-Inthanethi lapho iwebhusayithi itholakala okokuqala. Ikhukhi eligciniwe lisetshenziswa ekuhambeleni okulandelayo ukuthuthukisa ukubukwa kwewebhusayithi.
Ikhukhi lingavinjwa noma lisuswe ezimweni ezinjalo lapho ungavumelani nokuba neKhukhi. Kodwa-ke, ngokwenza njalo, iwebhusayithi kungenzeka ingalayishi, noma imisebenzi ethile yewebhusayithi kungenzeka ingasebenzi kahle, ngenxa yokuvinjwa kweKhukhi.
Qaphela: Njengamanje, awekho amakhukhi asetshenziswe kuwebhusayithi yethu aqoqa imininingwane engasetshenziselwa ukukukhomba.
Ungawaphatha futhi uwasuse kanjani amakhukhi
Amakhukhi angavinjelwa noma asuswe ngezilungiselelo zesiphequluli "Ukusetha" (noma "Ithuluzi"). Inketho eyodwa ukwamukela noma ukwenqaba wonke amakhukhi. Inketho yesibili ukwamukela amakhukhi athile avela kumawebhusayithi athile. Isiphequluli singasethwa ukuze silungiswe ukuze sikwazi ukukwazisa noma nini lapho uthola i-Cookie. Ukuphathwa kwamakhukhi nendlela yokuwasusa kuyahlukahluka ngeziphequluli ezithile. Zonke iziphequluli ziyahluka kuleli phuzu. Ukuze uhlole ukuthi isiphequluli sakho siwaphatha kanjani amakhukhi, sicela usebenzise umsebenzi wosizo esipheqululini sakho.